Semalt: Ungaita sei Kuti Usabvisa Query Parameters Kubva Google Analytics
Paunenge uchigadzira webhusaiti uye nekugadziridza ivo kutsvaga injini, mhando dzemibvunzo ndeimwe yezvikonzero zvinogona kuita kuti nzvimbo isakundikana kutarisa zvakanaka mumapeji ekutsvaga injini. Kune imwe nzvimbo yebhizimisi yekutengesa kutanga-up, kuite e-commerce webhusaiti inogona kuva imwe yenzira dzakanakisisa dzebhizimisi dzinogona kuvepo. Semuenzaniso, mabhizimisi ane simba rekuwana zvikwereti zvisingakwanisi zvemashamba munyika yose achishandisa dzimwe nzira dzekutengeserana dzekuInternet. Kudhinda kweDhijitori kunogona kusanganisira nzira dzakasiyana siyana dzekuita webhusaiti uye zvinyorwa zvinosangana nevanogamuchira. Zvinokwanisika kushandisa Search Engine Optimization pane webhusaiti uye kutora mutsauko kubva kune organic organic SERPs dzeimwe mazwi chaiwo.
Mutungamiri Mukuru weVatengi Vokubudirira Semalt Digital Services, Jack Miller, anorondedzera pano pane zvimwe zvinotambudza pamusoro pekusabvisa mhinduro dzemibvunzo kubva kuGoogle Analytics - corn moisture at harvest.
Kudhindwa kweDhijitara ndiko kuwanda kwezviitiko. Vose vanoita kunge vane chinhu chekuwedzera kuonekwa kwewebsite yako uye nekuwana kune vakawanda vanogona kutenga. Zvimwe zvehutano hwakapiwa mu kudhinda kwema digital platform kunosanganisira Search injini optimizations, Kubudiswa kwezvinhu uyewo mamwe mapurisa akaita seSocial Media Marketing (SMM). Kunze kwemasarudzo emibvunzo inobatsira zvose izvi zvinogadzirisa chinangwa chazvo zvakanaka pasina hitches..Mune dzimwe nguva, vanogona kubatsira pakuwedzera kuchengetedzwa kwekushandisa webhusaiti yako.
Referral spam idambudziko rinowanzosangana nevakawanda vashandisi veIndaneti. Kusina spam kubva kushandiswa kwewebsite zuva nezuva kunokosha. Spam inogona kuva neTrojans uye malware iyo inogona kukanganisa kuchengeteka kwekushandisa saiti yako. Mune zvimwe zviitiko, zvakakosha kusimudzira vanhu vako pamusana pekutsvaga kupesana kwepamende kunogona kuita kuti vashandi vavo vasaitike. Zvinyorwa zvinoshandiswa zvepa spam zvakasanganiswa pamwe nekunamatira kune dzimwe nzira dzinopesana ne-spyware zvinogona kudzivisa kuvepo kwekunge kune spam kurwisa. Zvakakosha kubvisa mapeji emibvunzo kuGoogle Analytics kuti utungamirire kutumira spam. Mune dzimwe nguva, vashandisi vanogona kuona nguva yekuchengetedza pavanenge vachinyora webhusaiti yenyu. Nguva dzose yeuka kuti kuchengeteka kwewebsite yako uye yevashandi kunofanirwa nekuchengeteka kwako.
Ungadzivisa sei mibvunzo mitemo
Unogona kubvisa mapiramiti emibvunzo mubhuku rako reGoogle Analytics kuburikidza nekutaridzirwa kudivi remutungamiri wako. Kubva pano, iwe unogona kubvisa account yako uye sarudza maonero. Mune jira rekuyera, unogona kutora maonero ekuona. Nzvimbo ino unokwanisa kukonzera maparadziro emibvunzo yaunoda muboka reGoogle Analytics. Paunenge uchiita shanduko idzi, zvinokosha kuti uone bhodhi rekuchengetedza kuti uone kuti hurongwa hahugadziri. Iyi nzira inogona kubatsira kune webhusaiti yako.
Google Analytics inogadzira zvinyorwa zvayo zvemasvomho kubva kune dzimwe URL dzakachengetwa. Mune zvimwe zviitiko, zvinobvira kuisa Google Analytics kutumira spam filuta kuti isabvisa fake webfambi yekushanyirwa. Muchiyero ichi, vashandisi vanogona kukwanisa kushanyira mawebhenekiti uye mamwe maitiro ekuitika kune mawebsite. Mhinduro yemapiritsa ndiyo imwe yemaitiro iyo Google Analytics inoshandisa kudzora ruzivo nemamatriki ewebsite. Makambani anoshandisa ruzivo urwu kuti avabatsire pakuronga mawebsite avo kumusoro mumajini ekutsvaga.